नेपालका लघु वित्तले लिएको ब्याजदर संसारमै सस्तो हो
विगत २५ बर्ष देखि लघुवित्तका क्षेत्रमा निरन्तर क्रियाशिल व्यक्तित्वको नाम हो रामचन्द्र जोशी । सामाजिक संस्था हुँदै लघुवित्त विकास बैंक बनेको छिमेकी लघुवित्त विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका जोशीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमबिएसम्मको अध्ययन गरेका छन् । हाल नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष समेत रहेका जोशीसँग नेपालमा लघुवित्त कम्पनीको अवस्था, योगदान र चुनौतीका बिषयमा केन्द्रित भएर गरिएको कुराकानी ।
सबै स्थानीय तहमा बाणिज्य बैंकका शाखा विस्तार भैरहेका छन्, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी पनि ग्रामिण क्षेत्रमा केन्द्रित भैरहेको देखिन्छ, लघु वित्त कम्पनीहरुले आफ्नो अस्थित्वको रक्षा कसरी गरिरहेका छन् ?
लघु वित्तका आफ्नै लक्षित समुह छन् । त्यहाँ बाणिज्य बैंक वा विकास बैंकहरु जानै सक्दैनन् । हामीले काम गर्ने भनेको धितो समेत नभएका विपन्न वर्गसँग हो । रुख, डाडाँ देखाएर अन्य बैंक तथा वित्तिय संस्थाले ऋण दिँदैनन् । हामी बिनाधितो ऋण प्रवाह गर्छाै । स्थानीय तहमा बाणिज्य बैंकहरु पुग्दा हामीलाई आफुले संकलन गरेको पैसा बैंकमा राखेर कारोबार गर्ने सुविधा प्राप्त भएको छ । वित्तिय साक्षरता बढेसँग हामीलाई पनि काम गर्न सहजै हुन्छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको शाखा विस्तारले लघु वित्त कम्पनीहरुले कहिल्यै थ्रेट महशुस गरेका छैनन् ।
पहिले ४० प्रतिशत वित्तिय पहुँच थियो । अहिले ६० प्रतिशत पुगेको छ, अझै ४० प्रतिशत नागरिकमा वित्तिय पहुँच पुगेको छैन् ।
गरिबको संख्या घटेपछि लघुवित्तको औचित्य सकिन्छ भन्ने अवधारणा पनि आएको छ, त्यस्तो समय आईसकेको हो ?
यो अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि उठेको सवाल हो । नेपालमा गरिबको संख्या निश्चित छ । तिनको अवस्थामा सुधार आएसँगै तिनिहरुलाई गरिने लघु वित्तको लगानी पनि बढाउनुपर्छ ।
2019-04-28 - 195 view(s) - bikashnews